Igbo, John: Lesson 054 - Ndị na-agụ akwụkwọ akụkọ na-ewetara Jizọs nwanyị akwa iko maka ikpe (Jọn 8:1-11) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 054 (Legalists bring an adulteress to Jesus)
c) Ndị na-agụ akwụkwọ akụkọ na-ewetara Jizọs nwanyị akwa iko maka ikpe (Jọn 8:1-11)
1 Ma Jizos gara ugwu Olive. 2 Ma n'ututu, ọ batara n'ulo uku Chineke; ndi Israel nile we biakute Ya. Ọ nọdụrụ ala, kụziere ha ihe. 3 Ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii kpọtara otu nwanyị e mere ka ọ kwaa iko. Mgbe ha guzobere ya, 4 ha sịrị ya: "Onye Ozizi, anyị hụrụ nwaanyị a ka ọ na-akwa iko. 5Ma n'iwu Moses ka Moses nyere ayi iwu ka ayi tue nkume di otú a. Gịnị ka ị na-ekwu banyere ya? "6 Ha kwuru nke a, na-anwale ya, ka ha wee nwee ihe ha ga-ebo ya. Ma Jisus ruru ala, were nkpisi-aka-Ya de n'ala.
Ndị òtù Kansụl ahụ hapụrụ iwe n'ụlọ ha n'ihi na Jizọs esiwo n'aka ha pụọ. Ìgwè mmadụ ahụ chere na ndị ndú ha kwere ka Jizọs nwee ohere ikwu okwu n'ụlọ nsọ. Ma ndị a nọgidere na-elegharị ya anya iji jide ya. Jizọs si ná mgbidi obodo ahụ pụọ ná mgbede, na-agafe ndagwurugwu Kidrọn.
N'echi ya, Jizọs laghachiri n'obodo ahụ na-abanye n'ụlọ nsọ ahụ juru juru. Ọ gbapughi isi obodo ahụ na ngwụsị Ememme Ụlọikwuu kama ọ nọgidere na-ekesa n'etiti ndị iro ya. Ndị Farisii mere omume nke ndị uweojii na-akpa àgwà ọma, karịsịa dị ka oriri ahụ bụ oge oriri na ịṅụ mmanya na-aba n'anya. Ha jidere nwanyị na-akwa iko. O mere ka ha nwalee Jizọs n'okwu a. Chineke na ndi mmadu ga-ahuta oke o bula n'adighi ike ya ka ha na-emebi iwu omenala mba ahu. Mana itinye aka na ntaramahụhụ iwu ahụ ga-egosi na ọ dị ike ma mee ka ọ ghara ịma ya. Ikpe ya banyere nwanyị ahụ ga-abụ ikpe nye onye ọ bụla nke ihere na-eme omume rụrụ arụ. N'ihi ya, ha na-echere ikpe ya nke ọma.
7 Ma mgbe ha nọgidere na-arịọ ya, o lepụrụ anya wee sị ha: "Onye ọ bụla nke na-enweghị mmehie n'etiti unu, ka ọ tụba ya nkume mbụ." 8 O wee hulata ọzọ, jiri mkpịsị aka ya dee n'ala. 9N'ihi na ha, mb͕e ha nuru ya, mb͕e akọ-na-uche-ha mara ha ikpé, ha we pua n'otù n'otù, site na ntà, …
Mgbe ndị Farisii boro nwanyị ahụ na-akwa iko ebubo n'ihu Jizọs, o hulatara ma jiri mkpịsị aka ya mee ihe, dere ya n'ala. Mana anyi amaghi ihe o dere, ikekwe iwu ohuru n'ime okwu - ima.
Ndị okenye ahụghị ihe kpatara "oge" ya, n'amaghị na onyeikpe nke ụwa nwere ndidi, ọ ga-egosikwa akọnuche ha. Ha chere na ha agbanyewo ya n'ibe.
Jizos we bilie, le ha anya nke-uku; ọ bụ ọdịdị Chineke, okwu ya bụ eziokwu na a gaghị agọnahụ ya. O kwuru na "ikpé", "Onye na-enweghị mmehie n'etiti unu, ya buru ụzọ tụfuo ya nkume." Jizos agbanweghi otù ihe nke iwu ah kama o mezuru ya. Nwanyị ahụ na-akwa iko kwesịrị ọnwụ; Jizọs a kwadoro ya.
Site n'omume ya, Jizọs kpebiri "ndị nsọ" nakwa dị ka onye na-akwa iko. Ya mere, o gbara ha aka ka ha gosi na ha adịghị ọcha site n'ibu nkume mbụ. Na nke a, ọ na-agbaji ndị na-ekpuchi nsọpụrụ ofufe n'ihu ha. Ọ dịghị mmadụ ọ bụla nwere onwe ya pụọ na mmehie. Anyị nile bụ ndị na-adịghị ike, ndị anwale na ndị dara ada. N'ebe Chineke nọ, ọ dịghị ihe dị iche n'etiti onye mmehie na onye ihu abụọ na-asọpụrụ Chineke. N'ihi na madu nile ejehiewo, we ghọ ndi nēmebi iwu. Onye ọ bụla nke mebiri otu iwu ahụ agbajila iwu ahụ n'ozuzu ya ma kwesị ka mbibi ebighi ebi.
Ndị okenye na ndị na-ede iwu na-achụ ụmụ anụmanụ àjà n'ụlọ nsọ iji kpuchie mmehie ha na-ekwupụta na ha bụ ndị mmehie. Okwu Kraịst metụrụ akọ na uche ha aka. Ha choro ijide onye Nazaret, ma ya onwe ya kpughere ajọ omume ha ma kpee ha ikpe. N'otu oge ahụ ọ debere iwu. Ndị ahụ na-ebo ya ebubo hulatara isi, chee na ha nọ n'ihu Ọkpara Chineke, maa jijiji site n'ịdị nsọ ya.
Ndị okenye na ndị ha na ha nwere ọmịiko hapụrụ, ebe ahụ tọgbọrọ n'efu, naanị Jizọs nọ n'azụ.
9b ruo nke ikpeazụ. A hapụrụ Jizọs na nwanyị ebe ọ nọ, n'etiti. 10 Jisus we bilie, hu ya, si, Nwanyi, òle ebe ndi nēbo gi ebubo? Ọ dighi onye ọ bula mara gi ikpé? 11 O we si, Ọ dighi onye ọ bula, Onye-nwe-ayi. Gaa. Site ugbu a gaa n'ihu, mmehie adịkwaghị."
Nwa nwanyị ahụ nọ na-ama jijiji. Jisos lere ya anya n'amara na nke oma ma juo ya, "Olee ebe ndi n'ebo gi biara, obughi onye no ikpe gi ikpe?" O chere na Jizọs, Onye Nsọ agaghị ata ya ahụhụ, mana ọ bụ naanị ya nwere ikike ikpe ya ikpe.
Jizọs hụrụ ndị mmehie n'anya; ọ bịara ịchọ ndị wanderers. Ọ pụghị ịta nwanyị ahụ na-eme mmehie ntaramahụhụ, ma nye ya amara ya. N'ihi na o bu mmehie anyị, dị njikere ịnwụ maka ụwa. Enye ama ada ikpe emi.
Ya mere ọ na-enye gị mgbaghara zuru ezu ebe ọ nwụrụ maka gị. Kwere na ya n'anya ka o nwere ike ịhapụ gị ikpe. Nabata mmụọ nke mgbaghara ya, ka ị ghara ikpe ndị ọzọ ikpe. Echefula na ị bụkwa onye mmehie, ọ bụghịkwa gị ka ndị ọzọ mma. Ọ bụrụ na onye ọzọ akwaa iko, ị bụ onye na-adịghị ọcha? Ọ bụrụ na ọ zuru, ị na-ekwesị ntụkwasị obi? Ekpela ikpe ka ewe ghara ikpe gị ikpe. Na ihe ị na-atụgharị, ọ ga-emetụta gị. Gini mere gi na-ele anya ahihia ahu di n'anya nwanne gi nwoke, ma leghaa ntuhie nke gi?
Jizos gwara ya ka oghara idaghachi nime ndoho site na mgbe ah. Iwu Chineke nyere ka o di ocha ka edoziworo ma ghara ime ka obi di ya ala. O duuru nwanyi a ka o choro ka ihu ya laghachi Chineke ma kwuputa nmehie ya. Ya onwe ya ga - enweta Mo Nso site na obara nke Nwa aturu ahu. O choro ihe choro ime ya, ma nye ya ike nke ndi obi gbawara agbawa; iji bie ndu. N'ihi ya, ọ na-agwa gị ka ị ghara imehie ọzọ; ọ dị njikere ịnụ nkwupụta obi gị.
EKPERE: Onyenwe anyi Jisos, ihere na eme m n'ihu gi, n'ihi na adighi m nma karia onye na akwa iko. Gbaghara m maka ikpe ikpe ma ọ bụ na-ewute ndị ọzọ. Me ka m dị ọcha site na ajọ omume. Ana m ekele gị maka ịgbaghara m. Ana m eto gị maka ndidi na ebere. Nyere m aka ka m ghara imehie site ugbu a. Mee ka mkpebi m sie ike ma mee ka m dị ọcha. Mee ka m baa ndụ nke ịdị nsọ.
Gịnị kpatara ndị na-ebo ebubo nke ndị na-akwa iko ji hapụ ọnụnọ Jisọs?